Taliban oo ku dhawaaqday Dowlad KMG ah | Dhacdo
Home Wararka Maanta Taliban oo ku dhawaaqday Dowlad KMG ah
Taliban oo ku dhawaaqday Dowlad KMG ah
Taliban ayaa maanta u magacawday Mullah Mohammad Hassan Akhund, oo ay saaran tahay cunaqabateynta QM, inuu noqdo madaxa xukuumad ku-meel-gaar ah oo ay dhistay.
Afhayeenka Taliban Zaibullah Mujahid, oo shir jara’aaid ku qabtay Kabul ayaa sheegay in Abdul Ghani Baradar, oo wax ka aas-aasay Taalibaan, uu noqon doono ra’iisul wasaare ku-xigeenka.
Mullah Mohammed Yaqub, oo ah wiilka aas-aasihii Taliban Mullah Omar, ayaa loo magacaabay wasiirka gaashaandhigga, halka wasaaradda arrimaha gudaha madax looga dhigay Sirajuddin Haqqani, oo ah hoggaamiyaha shabakadda laga cabsado ee Haqqani.
“Waxaan dad kale uga soo dari doonnaa qeybaha kale ee dalka.”
Amir Khan Muttaqi, oo ahaa wada-xaajoodihii Taalibaan ee wada-hadalladii Doha, kuna jiray dowladdii hore ee Afghanistan, ayaa loo magacaabay wasiirka arrimaha dibedda.
Previous articleFarmaajo oo waraaqaha ka guddoomay Safiirada Midowga Yurub & Shiinaha
Next articleShir albaabada u xiran yihiin oo u socdo Madaxweynaha & R/wasaaraha